အိမျရှငျမတှေ အမွဲတမျးစိတျညဈရတဲ့ ဆနျပိုး မတကျအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ? – Pyit Time Htaung
အိမျရှငျမတှေ အမွဲတမျးစိတျညဈရတဲ့ ဆနျပိုး မတကျအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ?
By Pyit TimePosted on October 9, 2021 October 9, 2021
အိမျရှငျမတှေ ကွုံတှရေ့လရှေိ့တဲ့ စိတျရှုပျစရာတဈခုကတော့ ဆနျပိုးတကျတဲ့ ကိစ်စပါပဲ။ 😓 😓 ထမငျးတဈခါခကျြဖို့အရေး ထမငျးခကျြတဲ့နရော မရောကျလိုကျဘဲ ဆနျပိုးဖယျနရေတာနဲ့တငျ အခြိနျကုနျသှားတတျတာမြိုးပေါ့။
ဒါကွောငျ့ ဒီနတေ့ော့ ဆနျပိုးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဗဟုသုတရဖှယျ အကွောငျးအရာလေးတှကေို အိမျရှငျမတှအေတှကျ အသုံးဝငျအောငျ ပွောပွပေးလိုကျပါတယျနျော 😁
ဆနျပိုးဘယျကစ 🤔 🤔
ဆနျရဲ့ သဘာဝအရ ကွာရှညျသိုလှောငျထားရငျ ပိုးတကျလရှေိ့ပါတယျ။ ကွိတျသားပျေါမှာလညျး မူတညျပွီးတော့လညျး စကျရုံကထှကျလာတဲ့ ကွိတျသားကောငျးရငျကောငျးသလို (၃) လအထိ အထားခံတာမြိုးလညျးရှိပါတယျ၊ ကွိတျသား သိပျမကောငျးတဲ့ဆနျမြိုးကတြော့ (၁) လလောကျအထိပဲ အထားခံတာမြိုးလညျး ရှိတတျပါတယျ။
ပထမအဆငျ့မှာ ဆနျပိုးအမတှကေ ဆနျစတှေ့ကေိုဖောကျပွီး ဥဥပါတယျ။ ဆနျပိုးတဈကောငျရဲ့ သကျတမျးက ပမျြးမြှ ၂၇ ရကျမို့ ဆနျပိုးအမတဈကောငျဟာ သူ့သကျတမျးအတှငျး အကွမျးဖဉျြးအားဖွငျ့ ဥပေါငျး ၃၀၀ ကြျော ဥပါတယျ။ ဥကတဈဆငျ့ ဆနျပိုးတှေ ပေါကျဖှားလာပါတယျ။
ဒုတိယအဆငျ့မှာ ဆနျပိုးအကောငျတှေ ပိုကွီးလာပွီး ပေါကျပှားနှုနျးလညျး ပိုမွနျလာပါတယျ။ ဒီအဆငျ့အထိ ဆနျပိုးတှကေို ဖယျရှားပွီး ဆနျအကောငျးကို ပွနျရှေးလို့ရနိုငျပါသေးတယျ။
အဲဒီတော့ ဆနျပိုးမတကျအောငျ 🤔 🤔
ဆနျကို ဆနျအိတျထဲမှာပဲ သိုလှောငျထားမယျဆိုရငျ ဆနျပိုးမတကျခငျ အိတျသားအရငျ တကျလရှေိ့ပါတယျ။ အိတျသားတကျတယျဆိုတာ ဆနျက မဖှေးတော့ဘဲ ညိုညဈညဈဖွဈလာတာမြိုးပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ဆနျကို အိတျအစား လလေုံတဲ့ ဆနျအိုး၊ ဆနျပုံးတို့နဲ့ သိုလှောငျသငျ့ပါတယျ။
ကွကျသှနျနီ၊ ငွုပျသီးခွောကျ၊ မီးသှေးတို့ကို ဆနျအိုးထဲရောထညျ့ထားရငျလညျး ဆနျပိုးတကျခွငျးကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ ထငျးရှူးသား လေး ငါးခြောငျးကို ဆနျအိုးထဲထညျ့ထားပေးလဲရပါတယျ။
ဆနျပိုးဖယျရှားနညျး 🚫 🕷 😊
1 – ဆနျကိုနပေူပူထဲမှာ ၁၅ မိနဈလောကျ ပွထားလိုကျပါ။ ပွီးရငျ စကောဝိုငျးထဲထညျ့ပွီး ဆနျပွာလိုကျရငျ အလယျမှာ ဆနျပိုးတှေ စုလာပါလိမျ့မယျ။
2 – ဆနျထညျ့ထားတဲ့ အိတျ၊ အိုး၊ ပုံးတို့ကို ဖှငျ့ပွီးတော့ ဆနျပျေါမှာ အဝတျစအဖွူလေး အုပျပေးထားလိုကျပါ။ ခဏကွာရငျ အဝတျစပျေါကို ဆနျပိုးတှေ တကျလာပါလိ့မျမယျ။ အဝတျကို ရမေစိုအောငျတော့ သတိပွုဖို့လိုပါတယျ။
3 – ဆနျကို ရခေဲသတ်ေတာထဲ သုံးရကျထညျ့ထားလိုကျမယျဆိုရငျလညျး ဆနျပိုးတှကေို နှိမျနငျးပွီးသား ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
4 – Don’t keep for too long.(အကွာကွီး သိမျးဆညျးမထားပါနဲ့။ ဆနျတှကေို နှဈရှညျလမြားစှာ သိမျးဆညျးစားသုံးခွငျးကလညျး ပိုးထိုးတတျပါတယျ။)
5 – Don’t store the rice inawooden container. (သဈသားပုံးတှထေဲမှာ ဆနျမြားကို ထညျ့သှငျး မသိုလှောငျထားပါနဲ့။ သဈသားပုံးတှထေဲမှာ ဆနျမြား ထညျ့သှငျးထားပါက ပိုးထိုးမွနျစပေါတယျ။
တကယျလို့ ဆနျထဲက ပိုးကောငျတှကေို ရှငျးထုတျခငျြပါက ဆနျထဲသို့ ငွုပျသီးအခွောကျတောငျ့မြား ထညျ့သှငျးထားလိုကျပါက ဆနျပိုးမြား ကငျးရှငျးသှားပါလိမျ့မညျ။ တကယျလို့ ရရှေညျသိမျးဆညျးပွီး စားသုံးခငျြပါက ကရဝေးရှကျ “Bay leaves” မြားကို ဆနျအတှငျးသို့ ရောနှော၍ထညျ့ထား လိုကျပါက ပိုးထိုးခွငျးရနျမှ ကငျးဝေးစပေါတယျ။ credit:မူရငျး
အိမ်ရှင်မတွေ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ရှုပ်စရာတစ်ခုကတော့ ဆန်ပိုးတက်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ 😓 😓 ထမင်းတစ်ခါချက်ဖို့အရေး ထမင်းချက်တဲ့နေရာ မရောက်လိုက်ဘဲ ဆန်ပိုးဖယ်နေရတာနဲ့တင် အချိန်ကုန်သွားတတ်တာမျိုးပေါ့။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ ဆန်ပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတရဖွယ် အကြောင်းအရာလေးတွေကို အိမ်ရှင်မတွေအတွက် အသုံးဝင်အောင် ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် 😁
ဆန်ပိုးဘယ်ကစ 🤔 🤔
ဆန်ရဲ့ သဘာဝအရ ကြာရှည်သိုလှောင်ထားရင် ပိုးတက်လေ့ရှိပါတယ်။ ကြိတ်သားပေါ်မှာလည်း မူတည်ပြီးတော့လည်း စက်ရုံကထွက်လာတဲ့ ကြိတ်သားကောင်းရင်ကောင်းသလို (၃) လအထိ အထားခံတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်၊ ကြိတ်သား သိပ်မကောင်းတဲ့ဆန်မျိုးကျတော့ (၁) လလောက်အထိပဲ အထားခံတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ပထမအဆင့်မှာ ဆန်ပိုးအမတွေက ဆန်စေ့တွေကိုဖောက်ပြီး ဥဥပါတယ်။ ဆန်ပိုးတစ်ကောင်ရဲ့ သက်တမ်းက ပျမ်းမျှ ၂၇ ရက်မို့ ဆန်ပိုးအမတစ်ကောင်ဟာ သူ့သက်တမ်းအတွင်း အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ဥပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ဥပါတယ်။ ဥကတစ်ဆင့် ဆန်ပိုးတွေ ပေါက်ဖွားလာပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့်မှာ ဆန်ပိုးအကောင်တွေ ပိုကြီးလာပြီး ပေါက်ပွားနှုန်းလည်း ပိုမြန်လာပါတယ်။ ဒီအဆင့်အထိ ဆန်ပိုးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ဆန်အကောင်းကို ပြန်ရွေးလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။
တတိယအဆင့်ရောက်သွားရင်တော့ ဆန်တွေက လက်နဲ့ဖြစ်လိုက်ရင်ကို ကြေမွသွားတာမျိုး၊ ဘယ်လိုမှကို ချက်လို့မရတော့တာမျိုး ဖြစ်သွားပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ရတော့တာပါပဲ။
အဲဒီတော့ ဆန်ပိုးမတက်အောင် 🤔 🤔
ဆန်ကို ဆန်အိတ်ထဲမှာပဲ သိုလှောင်ထားမယ်ဆိုရင် ဆန်ပိုးမတက်ခင် အိတ်သားအရင် တက်လေ့ရှိပါတယ်။ အိတ်သားတက်တယ်ဆိုတာ ဆန်က မဖွေးတော့ဘဲ ညိုညစ်ညစ်ဖြစ်လာတာမျိုးပေါ့။ ဒါကြောင့် ဆန်ကို အိတ်အစား လေလုံတဲ့ ဆန်အိုး၊ ဆန်ပုံးတို့နဲ့ သိုလှောင်သင့်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ၊ ငြုပ်သီးခြောက်၊ မီးသွေးတို့ကို ဆန်အိုးထဲရောထည့်ထားရင်လည်း ဆန်ပိုးတက်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ထင်းရှူးသား လေး ငါးချောင်းကို ဆန်အိုးထဲထည့်ထားပေးလဲရပါတယ်။
ဆန်ပိုးဖယ်ရှားနည်း 🚫 🕷 😊
ဆန်ပိုးမတက်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကာကွယ်နေတဲ့ကြားက ဆန်ပိုးတက်လာပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါ နည်း (၅) နည်းနဲ့လည်း ဖြေရှင်းနိုင်ပါသေးတယ်။
1 – ဆန်ကိုနေပူပူထဲမှာ ၁၅ မိနစ်လောက် ပြထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် စကောဝိုင်းထဲထည့်ပြီး ဆန်ပြာလိုက်ရင် အလယ်မှာ ဆန်ပိုးတွေ စုလာပါလိမ့်မယ်။
2 – ဆန်ထည့်ထားတဲ့ အိတ်၊ အိုး၊ ပုံးတို့ကို ဖွင့်ပြီးတော့ ဆန်ပေါ်မှာ အဝတ်စအဖြူလေး အုပ်ပေးထားလိုက်ပါ။ ခဏကြာရင် အဝတ်စပေါ်ကို ဆန်ပိုးတွေ တက်လာပါလိ့မ်မယ်။ အဝတ်ကို ရေမစိုအောင်တော့ သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။
3 – ဆန်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ သုံးရက်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆန်ပိုးတွေကို နှိမ်နင်းပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
4 – Don’t keep for too long.(အကြာကြီး သိမ်းဆည်းမထားပါနဲ့။ ဆန်တွေကို နှစ်ရှည်လများစွာ သိမ်းဆည်းစားသုံးခြင်းကလည်း ပိုးထိုးတတ်ပါတယ်။)
5 – Don’t store the rice inawooden container. (သစ်သားပုံးတွေထဲမှာ ဆန်များကို ထည့်သွင်း မသိုလှောင်ထားပါနဲ့။ သစ်သားပုံးတွေထဲမှာ ဆန်များ ထည့်သွင်းထားပါက ပိုးထိုးမြန်စေပါတယ်။
တကယ်လို့ ဆန်ထဲက ပိုးကောင်တွေကို ရှင်းထုတ်ချင်ပါက ဆန်ထဲသို့ ငြုပ်သီးအခြောက်တောင့်များ ထည့်သွင်းထားလိုက်ပါက ဆန်ပိုးများ ကင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မည်။ တကယ်လို့ ရေရှည်သိမ်းဆည်းပြီး စားသုံးချင်ပါက ကရဝေးရွက် “Bay leaves” များကို ဆန်အတွင်းသို့ ရောနှော၍ထည့်ထား လိုက်ပါက ပိုးထိုးခြင်းရန်မှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။ credit:မူရင်း
Previous post ထိုငျဝမျ မှာ လြှိုဝှကျတပျစှဲထားတဲ့ အမရေိကနျ အထူးတပျတှပွေနျလညျရုပျသိမျးပေးဖို့ တရုတျ ကမတ်ေတာရပျခံ
Next post ရုရှားနိုငျငံ ဓာတျငှသေ့နျ့စငျစကျရုံ ကွီးမားစှာပေါကျကှဲမှုဖွဈပှား(ရုပျသံ)